13/06/2018 - Page 3 sur 5 -
Minisiteran’ny Raharaham-bahiny : Mitaky “indemnité de représentation” ireo mpiasa
« Mbola tsy nisy nijery sy namaly mihitsy ny fitakianay hatramin’izao ». Io no nambaran’ireo mpiasa eo anivon’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny omaly. Marihina mantsy fa nanao fitokonana manoloana ny foibe-toeran’ny minisitera ireo mpiasa efa ho herinandro …Tohiny
Ankatoky ny fety : Tsy rototra amin’ny fananganan-tsaina ny malagasy
Ao anatin’ny fankalazana ny faha-58 taona nahazoan’ny malagasy fahaleovantena i Madagasikara amin’ity taona ity. Andro vitsy sisa no isaina dia higadona izany andro izany. Izany hoe eo amin’ny tapa-bolana eo, nefa raha ny tsikaritra sy …Tohiny
Fihaonan’ny parlemantera – governemanta : Miankina amin’ny fivorian’ny birao maharitra
Tsy tanteraka ary foana noho ny toe-draharaha politika nisy teo aloha teo, ny fihaonan’ny parlemantera sy ny governemanta. Rava ary noravaina mantsy iny ny governemanta notarihin’ny praiminisitra teo aloha, Mahafaly Solonandrasana Olivier, ary voatendry ny …Tohiny
Soamanandrariny : Zazavavy 06 nofaohan’ny fiara 4x4taona maty
Nisehoana lozam-pifamoivoizana nahafatesana zazavavy 06 taona indray teny Anosy lehibe, kaomin’ ambanivohitr’i Soamanandrariny, distrikan’Antanifotsy afakomaly tokony ho tamin’ny 08 ora sy sasany maraina. Araka ny loharanom-baovao, dia niampita ny arabe io niharan-doza io ka nofaohan’ny …Tohiny
Efa nandritrin’ny volana maromaro no nisian’ny fiaraha-miasa teo amin’ny Air Madagasikara sy ny Air Austral, saingy omaly vao nomarihana tamin’ny fomba ofisialy izany. Dingana voalohany hataon’ny roa tonta ny fanarenana ity kaompaniam-pitaterana an’habakabaka malagasy ity. ...Tohiny